'मेरो विरोध गर्नकै लागि केहीले मास्क लगाउन थालेका छन्, यो त स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो नि !' - अभियान खबर
‘मेरो विरोध गर्नकै लागि केहीले मास्क लगाउन थालेका छन्, यो त स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो नि !’
समाजवादी पार्टीबाट नेकपामा प्रवेश गरेका पूर्व नयाँ शक्ति नेताहरूलाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेलामा धूलोका कारण मास्क नलगाई हिँड्न सक्ने अवस्था नै थिएन, अहिले त्यो घटेको छ भनेको थिएँ केही तत्वहरूले मेरो विरोध गर्नकै लागि मास्क लगाउन थालेका छन् । मास्क लगाउने बानी बसाल्नु त स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो नि !’
‘केहीबेरअघि प्रचण्डजीले बाबुरामजीलाई पार्टीमा आउन आह्वान गर्नुभयो, बाबुरामजी मात्र किन ? फोरमकाहरू पनि आउनुस् न । नअटाउने कुरै छैन,’ ओलीले भने, ‘अरू पार्टीमा लागेर अल्मलिएका साथीहरूलाई म हार्दिक रूपमा आह्वान गर्दछु ।’
काठमाडौंको काँडाघारीबाट ११ वर्षीय बालकको अपहरण,बड्यो सुरक्ष चुनौती
खोजी गर्न डेढ सय प्रहरी परिचालन
साउन २१, २०७५ काठमाडौं– आइतवार साँझ काठमाडौंको काँडाघारीबाट अपहरणमा परेका एक बालकको खोजीका लागि डेढसय भन्दा बढीको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । आइतवार साँझ करिब ६ बजे काँडाघारीबाट बालक अपहरण परेको प्रहरीलाई सूचना प्राप्त भएको थियो । सिन्धुपाल्चोक घर भई काँडाघारीमा चिया पसल चलाउने महिलाका ११ वर्षीय छोरा अपहरणमा परेका हुन् । अपहरणको सूचना […]
नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्षसहित ७ जना पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। शुक्रबार नेविसंघ उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीसहित ७ जना पदाधिकारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राजीनामाको पत्र बुझाएका हुन्। राजीनामा दिने पदाधिकारीहरुमा उपाध्यक्ष शाहीसहित उपाध्यक्षहरु विकास केसी र सञ्जय यादव, महामन्त्री सरोज थापा, सहमहामन्त्रीहरु प्रकाश घिमिरे, अच्युत कलौनी र प्रेमाज जोशी रहेका छन्। नेविसंघ उपाध्यक्ष शाहीले […]